Android တွင်မိဘထိန်းချုပ်မှုကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Ignatius ခန်းမ | | အန်းဒရွိုက်, လည်ပတ်မှုစနစ်များ
ကလေးငယ်များသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကနည်းပညာ၌စတင်ခဲ့ကြသည်။ သာ၍ ကြီးသောဘေးများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်၊ မိဘထိန်းချုပ်မှုကို set up ၎င်းတို့ကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အသက်အရွယ်ကြောင့်၎င်းတို့အားဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုရယူခြင်းမှတားဆီးရန်။
အကယ်၍ သင် Android မှကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုသိလိုလျှင် Android ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်ပါ သင်ထည့်သွင်းထားသည့်အပလီကေးရှင်းများအားသင်မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်ကိုအချိန်တိုင်းအဘယ်သို့သိနိုင်မည်ကိုဂူဂဲလ်မှပေးသောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ Family Link ဖြစ်သည်။
မိဘထိန်းချုပ်မှု။ ဒီရွေးစရာကို Play စတိုးတွင်ရရှိနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုအသုံးပြုသောအရွယ်၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ အသုံးပြုမှုနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
မိသားစု Link ကို။ Family Link ဆိုသည်မှာဂူးဂဲလ်မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် သီးခြားကိရိယာတစ်ခု၏အသုံးပြုမှုကို configure လုပ်ပါ.
1 Google Play ဖြင့် Android တွင်မိဘ၏ထိန်းချုပ်မှု
2 Family Link ဖြင့် Android တွင်မိဘထိန်းချုပ်မှု
2.1 Family Link ကို Install လုပ်ပါ
2.2 ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် Family Link ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း
2.3 ထည့်သွင်းထားသော applications များပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
3 Android Link ဖြင့်မိဘထိန်းချုပ်မှုကိုတပ်ဆင်ပါ
Google Play ဖြင့် Android တွင်မိဘ၏ထိန်းချုပ်မှု
Android တွင်မိဘ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုသက်ဝင်စေရန်ကလေးငယ်တစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကိုယာယီအသုံးပြုခွင့်ရသောအခါ၊ အောက်ပါအသေးစိတ်အဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
Play Store ကို ၀ င်ပြီး၊ အလျားလိုက်သုံးလိုင်း Play Store ချိန်ညှိချက်များကိုရယူရန်နှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုနှိပ်ပါ။
အတွင်း setting များကိုကိုနှိပ်ပါ မိဘထိန်းချုပ်မှု, အသုံးပြုသူထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း၌တွေ့ option ကို။
ပြီးလျှင် screen ထိပ်ဘက်ရှိ switch ကိုဖွင့်သည် ကျွန်တော်တစ် ဦး PIN ကိုတည်ထောင်ရန် access ကို (ကျွန်တော်2ကြိမ်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်) ။
ပြီးရင်ငါတို့ကန့်သတ်ရမယ် အသုံးပြုမှုနှင့်ဒေါင်းလုပ်အများဆုံးအသက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ပေါ်ရှိ applications များနှင့်ရုပ်ရှင်နှစ် ဦး စလုံး။
Family Link ဖြင့် Android တွင်မိဘထိန်းချုပ်မှု
ငါတို့ကလေးရယူနိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုစီမံရန်ဂူဂဲလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား application နှစ်မျိုးကိုရနိုင်သည်။ မိသားစု Link ကို y ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်မိသားစု Link ကို။
Family Link သည်အကြောင်းအရာအမျိုးအစား၊ နာရီပေါင်းများစွာ၊ စမတ်ဖုန်း၏တည်နေရာကိုသိရှိရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော်လည်းကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် Family Link သည်ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်ထားရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ငါတို့စီမံချင်တဲ့စက်မှာ install လုပ်ပါ.
Google ကမိသားစု Link ကို
Family Link ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်
Family Link ကိုလည်း iOS တွင်ရနိုင်သည်ထို့ကြောင့်၊ ဖခင်၊ မိခင်သို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူတို့တွင် Android ကိရိယာမရှိပါကကလေးများသည် terminal နှင့်လုပ်ဆောင်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုစီမံလိုပါကဤလျှောက်လွှာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Family Link ကို Install လုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့အဝေးမှစီမံခန့်ခွဲလိုသောစက်ကိုမပြင်ဆင်မီသင်လုပ်သင့်သည်မှာပထမ ဦး ဆုံး Family Link, ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုမည့် application ကိုသွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်ပါ.
ဤအပလီကေးရှင်းကိုပထမတစ်ခုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည် ကုဒ်နှင့်ငါတို့ကိုပေး Family Link မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကလေး၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်
၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပြီးပါက၎င်းကိုစောင့်ကြည့်တော့မည့် Gmail အကောင့်တစ်ခုတည်ထောင်ပြီးသည်နှင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် FAmily Link ကိုထည့်သွင်းရမည်။ ကလေးရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာ.
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် Family Link ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း
Family Link အပလီကေးရှင်းကိုကလေး၏စက်တွင်ထည့်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်လိုသည့်ကိရိယာကိုရွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ဒီကိရိယာ.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားကိရိယာတစ်ခုကိုရွေးပါက၎င်းသည်မိဘများအသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန် Family Link application တစ်ခုကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။
ထို့နောက်ကလေး၏ Google အကောင့်အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သင့်တွင်ဖန်တီးမှုမရှိသေးပါက Create account ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း ၀ င်းဒိုးမှတိုက်ရိုက်ဖန်တီးနိုင်သည်။
ထို့နောက်ဖုန်းကိုအစက configure လုပ်ထားသောအကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်လိုက်သော account နှင့်ပြလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကအသေးစားရဲ့အကောင့်ကိုရွေးပါ.
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်အခြားအကောင့်များအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ ကျန်အကောင့်များကိုဖျက်ပစ်ခြင်းအားဖြင့်၊ အကောင့်နှင့်ပတ်သက်သောစာများ၊ အဆက်အသွယ်များနှင့်အခြားဒေတာများကိုလည်းဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
ထိုအချိန်တွင် Family Link လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ရမည် setup ကိုကုဒ် အသေးအဖွဲ၏အကောင့်အားမိဘများသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူများ၏မှတ်တမ်းနှင့်ဆက်စပ်ရန်လျှောက်ထားချက်၏။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ အသေးစား၏အကောင့်အသစ်အကြောင်းကြားရန်သတင်းစကားကိုပြလိမ့်မည်။ သူ့မိဘများ၏မိသားစုအုပ်စုတွင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိပ်ပါ ဆက်သွယ်ပါ.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာဖခင်၊ မိခင်သို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူသည်ထိုစက်ပေါ်တွင်ရှိမည့်တည်နေရာ၊ အသုံးပြုသောအချိန်၊ အပလီကေးရှင်း၊ အကောင့်ဆက်တင်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ၊ Allow ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင်ပရိုဖိုင်းမန်နေဂျာကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ခံရသည်။ ဤစီမံခန့်ခွဲသူကကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည် -
စကားဝှက်များအသုံးပြုရန်အတွက်စည်းမျဉ်းများချမှတ်ပါ။ ဒီရွေးစရာက PIN နှင့်မျက်နှာပြင်သော့ခတ်ထားသောစကားဝှက်များတွင်ခွင့်ပြုထားသောအရှည်နှင့်အက္ခရာများကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
မျက်နှာပြင်သော့ခတ်ရန်ကြိုးစားမှုအရေအတွက်ကိုထိန်းချုပ်ပါ။ အကယ်၍ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ကျော်လွန်ပါကဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
လျှို့ဝှက်နံပါတ်သက်တမ်းကိုသတ်မှတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမျက်နှာပြင်သော့ခတ် PIN သို့မဟုတ်စကားဝှက်ပုံစံကိုပြောင်းလဲသင့်သည့်အကြိမ်ရေကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သိုလှောင်ခြင်း encryption။ သိမ်းဆည်းထားသော application data များကို encrypt လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည် Family Link application မှတစ်ဆင့်အဝေးမှစီစဉ်နိုင်သည်။ ဤကိရိယာမန်နေဂျာစတင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီကိရိယာမန်နေဂျာကိုဖွင့်ပါ.
ထည့်သွင်းထားသော applications များပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
ကျွန်ုပ်တို့ကလေး၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့် configure လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းစက်ပေါ်ရှိထိုအချိန်က install လုပ်ထားသည့် application အားလုံးသူတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုမလိုစစ်ဆေးရပါမည်။ အကယ်၍ မဟုတ်ခဲ့ပါက၎င်းသည် device မှဖယ်ထုတ်ရန် application တစ်ခုစီနှင့်သက်ဆိုင်သော switch ကိုပိတ်ထားရုံသာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကလေး၏ကိရိယာကိုငါတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နောက်ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ Family Link မှတစ်ဆင့်မိဘများသည်ကလေး၏ကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Android Link ဖြင့်မိဘထိန်းချုပ်မှုကိုတပ်ဆင်ပါ
Family Link အပလီကေးရှင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါအသေးအဖွဲအသုံးပြုမှုကိုစီမံကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးအသေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရွယ်မရောက်သေးသူများ၏ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ပုံများကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
privacy ကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်အစကန ဦး အသေးအဖွဲ၏တည်နေရာကိုအလုပ်မလုပ်သောဤလုပ်ဆောင်မှုသည်အသေးအဖွဲ၏တည်နေရာကိုကျွန်ုပ်တို့အားသိစေသည်။
အပိုင်းမှတဆင့်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အချိန်ကိုသိနိုင်ပါသည် သငျသညျ applications များအသီးအသီးနှင့်အသီးအသီး၏ဖန်ဆင်းတော်မူပြီသုံးပါ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသောနေ့၊ မတိုင်မီ၊ နောက်ဆုံး ၇ ရက်နှင့်နောက်ဆုံးရက် ၃၀ တွင်စက်၌ထည့်သွင်းထားသည်။
ဒီရွေးချယ်မှုအတွင်းမှာငါတို့လုပ်နိုင်တယ် နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကန့်သတ်ထား၏ လျှောက်လွှာနှုန်းသို့မဟုတ် လျှောက်လွှာအသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပါ.
Device Details option အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့က device ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ် အသံတီးသည်အသုံးပြုသူများကိုထည့်ပါသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပါ၊ အမည်မသိသည့်ရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များကိုတပ်ဆင်ပါ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Android တွင်မိဘထိန်းချုပ်မှုကိုမည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း
4D ပရင်တာများ။ သူတို့ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ။